ဆေးလိပ်မသောက်ဘဲဘ ၀ ။ ဆေးလိပ်ဖြတ်ပုံ။ nosmokelife.com
Coronavirus (COVID19) နှင့်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း
Published 12 / 05 / 2020 Rinaldo
ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့် coronavirus ။ ၂၀၂၀ မေလအတွက်အချက်အလက်များအသစ်ပြောင်းခြင်း အဘယ်ကြောင့်ဤသို့ဖြစ်ပျက်ရသည်မှာနက်နဲသောအရာဖြစ်ပေသည်။ Toli ဆေးရွက်ကြီးမီးခိုးသည်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကိုပျက်ဆီးစေပြီးနီကိုတင်းကိုတစ်နည်းနည်းဖြင့်ဖြစ်စေသည်။ အပြည့်အစုံဖတ်ပါ →
ဆေးလိပ်နှင့် 2019-nCoV, ကိုဗစ် -19, ကိုဗစ် 19, SARS-CoV-2, SARS-CoV-2 ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း, ဆေးလိပ်သောက်အဆုတ်
Published 28 / 04 / 2020 Rinaldo
passive ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းမှဘာအန္တရာယ်နှင့်လူတစ် ဦး အားအခြားလူ၏ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းဖြင့်အသက်ရှူစေသနည်း။ လူတစ် ဦး သည်ဆေးလိပ်မသောက်လျှင်သူသည်ဆေးလိပ်သောက်သည့်အခန်းတွင်မနေပါသို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးဝါးပါ ၀ င်နေဆဲဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အန္တရာယ်ရှိသည်။ အပြည့်အစုံဖတ်ပါ →
Разное အန္တရာယ်, ဆေးလိပ်သောက်, တစ်ပတ်ရစ်မီးခိုး
⚡ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့် coronavirus ။ အချက်အလက်အသစ်။
Published 24 / 04 / 2020 Rinaldo
COVID19 နှင့်အဆက်မပြတ်အဆင့်မြှင့်တင်ပြီးသုတေသနပြုထားသောအချက်အလက်များအရ coronavirus ကူးစက်မှုသည်စနစ်တကျရောဂါဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာတစ်ကိုယ်လုံးကိုအဆုတ်များသာမကအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါများကဲ့သို့အထက်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောင်ရမ်းခြင်းဖြစ်စဉ်များနှင့်လည်းထိခိုက်နိုင်သည်ကိုဆိုလိုသည်။ အပြည့်အစုံဖတ်ပါ →
ဆေးလိပ်နှင့် ACE2, CD147, ကိုဗစ် -19, ကိုဗစ် 19, SARS-CoV-2 ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း, မီးခိုး, ဗိုင်းရပ်, က, coronavirus, COPD
Published 20 / 04 / 2020 Rinaldo
ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ကိုအမည်ပေးခဲ့သည်။ ဘယ်တော့လဲ အခုအချိန်မှာစတင်မဆိုအခိုက်မှာ! အခု! ဘာကြောင့်လဲ အခု - သင်ဖတ်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတာသင်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကိုဖယ်ရှားပစ်နိုင်ပြီးချက်ချင်းပဲဖြစ်ပျက်သွားသည်။ ဒါဟာဘာမှဖြစ်နိုင်ပါတယ် ... အပြည့်အစုံဖတ်ပါ →
ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ဘယ်လိုမြန်မြန် ချက်ချင်းပစ်, время, ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့အချိန်
Published 17 / 04 / 2020 Rinaldo
2020ပြီ ၂၀၂၀။ ကမ္ဘာကြီးသည်ဤအချိန်ကိုအမြဲတမ်းသတိရနေလိမ့်မည်။ COVID-0 ရောဂါကြောင့်ဖြစ်သော SARS-C2V-19 ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှု။ Coronavirus ကူးစက်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောဆိုးကျိုးများမှာ atypical pneumonia ကိုသာကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိဘဲဗိုင်းရပ်စ်သည် ဦး နှောက်ပျက်စီးမှုကိုဖြစ်စေသည်၊ အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်းကိုထိုးဖောက်နိုင်သည်။ အပြည့်အစုံဖတ်ပါ →
ဆေးလိပ်နှင့် 2019-nCoV, ကိုဗစ် -19, SARS-CoV-2, ရောဂါကူးစက်, coronavirus
Published 23 / 03 / 2020 Rinaldo
ငါဆေးလိပ်ဖြတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်နောက်တဖန်မမီးခဲ့ပါဘူး ဤခေါင်းစဉ်သည်အသစ်အဆန်းမဟုတ်ပါ၊ များစွာသောပြက်ရယ်ပြုခြင်းကိုပင်ငြီးငွေ့သော်လည်းယင်းနှင့်သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိသေးပါ။ ယခုဤစာကိုကျွန်ုပ်ရေးနေစဉ်အချိန်ကြာမြင့်စွာဆေးလိပ်မသောက်တော့ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်၊ ကျွန်ုပ်ဆေးလိပ်မသောက်တော့ပါ၊ အပြည့်အစုံဖတ်ပါ →
နောက်တစ်ခုကပစ်ချ ဆေးလိပ်သောက်, မထွက်နိုင်ဘူး, နီကိုတင်း patch ကို, အနှောင့်အယှက်, ဆေးလိပ်သောက်ဆေး
ယခင် entries တွေကို
ကို Select လုပ်ပါ ကျေးဇူးပြု.
OS🌎🌍🌍 SOS ALERT
Coronavirus ရောဂါ (COVID-19)
Coronavirus COVID-19 ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်များ
Meta tag များ
© 2020 ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းမရှိဘဲဘဝ
မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက် • သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီ • အသုံးပြုသူသဘောတူညီချက်
Nosmokelife.com သည် cookies များကိုအသုံးပြုသည်။ မက်ဆေ့ခ်ျကိုပိတ်ရန် "Accept" ကိုနှိပ်ပါ။ ပိုမိုလေ့လာပါ။